မနက်စာ... အာဟာရ -၂ – Pann Satt Lann Books
လူတစ်ယောက်အတွက် မနက်စာကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ပြည့်ပြည့်ဝဝစားရသလို မနက်ခင်းအိပ်ရာမှထပြီးခါစ မနက်ခင်းအတွေးအာရုံကောင်းသည်လည်း တစ်နေ့လုံးစာအတွက် အရေးအကြီးဆုံးပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွေးဟာတစ်မနက်ခင်းမှစ တစ်နေ့လုံးအတွက် ခွန်အားသတ္တိလည်းဖြစ်ပါတယ် ….
ကိုယ်ခန္ဓာအတွက် မနက်စာအာဟာရတွေစားပေးရသလို စိတ်၊ နှလုံးသားအတွက်လည်း မနက်စာ အာဟာရလေးတွေ ကျွေးရပါမယ်။ ဒီစာအုပ်လေးမှာ ဆရာမက စိတ်အာဟာရထမင်းပွဲ (၃၀) ပြင်ပေးထားပါတယ် ….
ဒီစာအုပ်လေးက စာချစ်သူရဲ့ တစ်နေ့တာအစကို စိတ်နှလုံးခွန်အားပြည့် အောင်အောင်မြင်မြင် ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့ အနားမှာထားရမယ့် အဖော်မွန်ကောင်း စာအုပ်လေးတစ်အုပ်ပါ….
5.4 × 0.2 × 8.2 inches
ပန်းဆက်လမ်းစာပေ၊ 2022 ဇွန်လ (ဆဋ္ဌမအကြိမ်)
မနက်စာ… အာဟာရ -၂ အား ဝေဖန်သုံးသပ်မှု4ရှိပါသည်။
Ingyinn Moe – June 2, 2021
မနက်တိုင်း အစ်မမွန်ဟော်စီရဲ့စာတွေဖတ်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အများကြီး ဆန်းစစ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစ်မစာတွေကနေ စိတ်ခွန်အားတွေရခဲ့ပြီး အခုဆို အစ်မလိုမျိုး လူအများအတွက် စိတ်ခွန်အားအတွက် အကျိုးပြုစေတဲ့ စာတွေတောင် နေ့တိုင်းရေးတင်ပေးဖြစ်နေပါပြီ။
လက်ဦးဆရာလည်းဖြစ်တဲ့ အစ်မ ဒီထက်မက အောင်မြင်ပါစေ။
စာတွေ ဒီ့ထက်ပိုရေးနိုင်ပါစေ ❤️☺️
အန်တီလည်း ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်ပါစေရှင့် ❤️
ဥမ္မာ – June 16, 2021
သမီးကခုမှ အသက် ၁၇ ဘဲရှိသေးတာပါ…အ့မို့ တီချယ် မွန်လို့ခေါ်ပါရစေရှင့်…တီချယ်မွန့် ရဲ့ မဂ်လာပါဆရာမစာအုပ်ကိုပထမဆံးဖတ်ဖူးတာပါ…နောက်ပြီး Morning Vitamin 1 ဆက်ဖတ်ဖြစ်တယ်…သမီးနဲ့အရမ်းကိုက်တယ်…ကိုယ့်ကိုကိုယ်လဲ..အော်..ငါပြင်ရမာပါလား..လား..ပေါင်းများစွာနဲ့..ပြန်မြင်ပြီး..ပြင်ဖြစ်တယ်…Morning Vitamin2လေးကိုလဲ……… ဖတ်ချင်နေပါပြီ..။
May Thingyan – June 19, 2021
Fb ပေါ်မှာ စပြီး ဆရာမ အရေးအသားတွေကို ဖတ်ရတာ အင်အားဖြစ်စေခဲ့တာမို့ Follow လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ မနက်စာအာဟာရ ၂ ကို စပြီး ဖတ်လိုက်ရကတည်းက အားဆေးတိုက်လိုက်လို့ အားပြည့်သွားသလိုပါပဲ စာအုပ်ပြီးသွားမှာ နှမျောမိနေခဲ့တယ်။ ကိုယ်မသိတာတွေ အများကြီး သိသွားခဲ့လို့ ကျေးဇူးပါဆရာမ။(ကျွန်မသိသော အမေရိကားလေး ဖတ်နေရင်း review လာရေးခြင်း?)
May Thingyan – August 7, 2021
ဆရာမမွန်ရဲ့ မနက်စာ…အာဟာရ ၂ မှာ ကိုယ်နဲ့ကွက်တိထပ်တူကျနေတာ စာတပုဒ်ကတော့ ” ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုပေးခြင်း” ပဲ☺ လစာထုတ်တိုင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ ကို ဒီနေ့တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုချမယ်လို့ ပြောလိုက်ရင် ပြူးကြောင်ကြောင်နဲ့ ဘာလဲဟ ဆိုတဲ့ မျက်နှာပေးတွေနဲ့ကြည့်တာ ခဏခဏ ခံရတယ် လကုန်တိုင်းလည်း ကိုယ်လိုချင်တာလေး (သို့) ကိုယ်စားချင်တာလေး အမြဲ ဝယ် စား ဖြစ်တယ် အဲ့လိုလုပ်တိုင်း moti လုပ်လိုက်တယ်ပဲ သဘောထားတယ် အခုဆရာမရဲ့ စာလေးထဲမှာ ဆရာမက အားပေးထားတာတွေ့တော့ အားတက်မိတာအမှန်ပဲ 😍ဆရာမရဲ့ စာတွေ ဖတ်ပြီး အားအင်တွေရတာတော့ အမှန်ပါပဲ